Sarkaal Ka Tirsan FBI Maraykanka Ah Oo Shaqada Looga Eryay Fariin Lidi Ku Ah Donald Trump – somalilandtoday.com
Sarkaal Ka Tirsan FBI Maraykanka Ah Oo Shaqada Looga Eryay Fariin Lidi Ku Ah Donald Trump
(SLT-Washington)-Sarkaal sare oo ka tirsan hay’adda sirdoonka Maraykanka ee FBI ayaa shaqadii laga eryay kadib markii sida la sheegay uu qof ay wada shaqeeyaan u direy fariin lid ku ah Trump sanadkii 2016-kii, xilligaas oo uu socday ololihii doorashada madaxweynenimada dalkaas.
Afhayeen u hadlay FBI-da ayaa BBC-da u sheegay in aysan ka hadli doonin hadda arrinka Mr Strzok.
Waxa kale oo uu Trump ku baaqay in dib loo furo baaritaankii Hillary Clinton, isaga oo sheegay in uu ahaa mid ku dhisan eex, qiyaamana ku ah dadka Maraykanka.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionLisa Page waxa ay ahayd la taliyaha xagga sharciga ee agaasimihii hore ee FBI-da Andrew McCabe
Mr Strzok ayaa fariin qoraaleed u diray haweenay garyaqaanad u ahayd FBI-da Lisa Page, isaga oo u sheegay in Trump uusan waligiis madaxweyne noqon doonin.
Balse Trump ayaa labadoodaba ku sheegay “mucaashaqiin FBI-da”, wuxuuna ku tilmaamay kuwa guuldaraystay.
Waa qofkii sadexaad oo heer sare ka joogay FBI-da, kuna lug lahaa baaritaanka Ruushka iyo kii Clinton ee shaqada laga eryo tan iyo intii uu Trump qabtay xilka.